မြန်မာနိုင်ငံမှကလေး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမစံချိန်တင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » World News » မြန်မာနိုင်ငံမှကလေး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမစံချိန်တင်
မြန်မာနိုင်ငံမှကလေး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမစံချိန်တင်
Posted by bigbird on Feb 14, 2011 in World News | 13 comments
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့ နယ်တစ်ခုတွင် အသက် ၁နှစ်အရွယ် ယတီမင်း ဆိုသူကလေးငယ်
တစ်ဦးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခြေချောင်းလက်ချောင်းအများဆုံးပိုင်ရှင်အဖြစ်စံချိန်တင်သွားကြောင်း
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ထုတ် Thairath သတင်းဌာန ကဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ခြေချောင်းတစ်ဖက်လျှင်
၇ ချောင်း၊ လက်ချောင်းတစ်ဖက်လျှင် ၆ ချောင်း၊ စုစုပေါင်း ၂၆ချောင်းဖြင့် စံချိန်သစ်တင်သွားခြင်းဖြစ်ပါ
သည်။ စံချိန်ဟောင်းပိုင်ရှင်မှာ အန္ဒိယနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး ခြေချောင်းလက်ချောင်းစုစုပေါင်း ၂၅ချောင်းရှိပါသည်။
ကလေး အသက်ကြီးလို့ လှလှပပ လေဒီရှူး စီးလို့ မလွယ်ဘူး ထင်တယ်။
ယိုးဒယားဘာသာ သတင်းဝပ်ဆိုက်ဆိုတော့ သူရေးထားတဲ့နာမည်ကို
အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ မှားခဲ့ပါက ခွှင့်လွှတ်ပါရန်…
ရတီမင်း ဆို ပိုမှန် မလားဘဲ။ မြန်မာ နာမည်က ယတီ လို့ မပေါင်းဘူး။ ရတီ လို့ ပေါင်းတယ်။
အောင်မာ ဘာလို့လေဒီရူးစီးမရမှာလဲ တစ်ယောက်ထဲအတွက် အော်ဒါမှာပြီး ချုပ်ခိုင်းမှာပေါ့အေ
အန်တီဆူးပြောတဲ့အတိုင်း ပြင်ဆင်ဖက်ရှုပေးပါရန်..ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ ခင်ဗျာ။
အိုက်ဒီ ဂင်းနစ်အကြောင်းကို ပြောပြကြပါဦး
ဘူက ဘယ်တုန်းက ဘာတွက် ဖန်တီးထားတယ်
ဂင်းနစ်ထဲပါရင် ဘာရတယ် ညာရတယ်ဆိုတာ
27 August 1955 မှာ ပထမဆုံးစာအုပ်ထွက်တယ်..။
အဲဒီထဲပါဖို့ .. ငွေပေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့..။ ဒါပေမဲ့.. မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်စေချင်ရင် ..အမြန်ကြေးပေးရမယ်.။ ဆာတီဖကိတ်အပိုလိုချင်ရင်..ငွေပေးရမယ်တဲ့..။
The 55-year history of Guinness World Records began withasingle question, the type of question that has been repeated millions of times at dinner parties, pubs, kitchen tables, classrooms and work places across the globe.
Duringashooting party in County Wexford, Ireland, in 1951, Sir Hugh Beaver – then Managing Director of the Guinness Brewery – askedasimple question: what was Europe’s fastest game bird? Despiteaheated argument and an exhaustive search within the host’s reference library he could not find the answer.
Sir Hugh realized that similar questions were going unanswered all around the world, and thatadefinitive book containing superlative facts and answers would be of great use to the general public. With the help of the London-based fact-finding twins Norris and Ross McWhirter, he soon set about bringing this definitive collection of superlative facts to reality. On 27 August 1955, the first edition of “The Guinness Book of Records” was bound and, by Christmas that year, became Britain’s number one bestseller.
# How much do I have to pay when I make my record attempt?
မိုက်တယ် သင်္ချာတွက်ရင် အိုကေတယ်
မူလတန်းမှာဆို လက်ချောင်းတွေ အများကြီးထောင်ရတာအိုကေတာပေါ့
မြန်မာစာနယ်ဇင်းတွေ မသိသေးဘူးလားမသိဘူး..။ ဂင်းနစ် စံချိန်တင်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်..။
ဟို..တခါက..အသက်အကြီးဆုံးမြန်မာအဖွားအို ကတော့ … ဂင်းနစ်စာအုပ်ထဲပါသွားပုံမရဘူး..။
အခုကလေးကတော့ .. လူကိုယ်တိုင်ပြလို့ရနေတော့ ..ရတာနေမယ်..။
စံချိန်တင် ရရင် လက်မှတ် အပြင် ပိုက်ဆံ ကော ရသေးလား
အသက်အကြီးဆုံး မြန်မာအဖွား ကတော့ ယုံစရာမရှိပါဘူး
အထောက်အထား က မှတ်ပုံတင်အရဆိုတော့…ကျွန်တော့် မှတ်ပုံတင်မှာတောင်၅ နဲ့ ၂ မှားရေးထားတာအသက် ၃ နှစ်ကြီးနေတယ်…ဒါက ခု ဂဏန်း မှားလို့ ဆယ် ဂဏန်းသာဆိုရင် ပြီးရော